China PG27DQI-165Hz fekitori uye vagadziri | Yakakwana Ratidza
Iyi modhi ine ese eSports mashandiro anotarisirwa, ayo anozvirumbidza 1ms nguva yekupindura uye AMD FreeSync iyo inobvisa stutter uye kubvarura, asi ikozvino neHDR. Iyo nyowani High Dynamic Range (HDR) ficha inovandudza yako mutambo wemitambo uine yakafara renji uye chena kuratidza kusanzwisisika kujeka uye ruzivo iwe usati wamboona. Usambofa wakarasikirwa nemuvengi wako achinyangira mumumvuri zvakare. Yakatsigirwa Plug uye tamba uye uuye neyemukati adapter ..
Tora ruoko rwepamusoro mune chero mamiriro emitambo neiyo yepamusoro 165Hz yePG dzakateedzana.Kutora iyo yekukurumidza-yekukurumidza zororo chiyero uye kuisanganisa neiyo yakazara suite yezvinhu zveprimiyamu kunogadzira yakakodzera kukwikwidza eSports kuratidza pane isina kumboitika mutengo poindi. Ikuvimbisa yakasviba-yakapfava chiitiko, iyo PG nhevedzano ichapa zvakanakisa hupenyu-hwakaita semutambo uye mukana wekuona wega wega furemu uchiunzwa kwauri iwe witout uchirova rova. Enda kumusoro uye kupfuura izvo zvakajairwa nemeso ako nekuvandudza ako mafram.
Auto-switching RGB mwenje inounza iwe inonakidza yekuona mabiko, mechi pamwe neyakawanda yeayoarket zvinodikanwa zvemavara.Vashandisi vanogona DIY kuratidzira Logo.Yakavakirwa mu powrsupplywill kunounza iwe yakachena tafura
QHD inopa kanokwana pixel density yeHD, ichiburitsa zvakadzama tsananguro, pini-yakapinza inoonekwa, pamwe nekugadzira nzvimbo yakakura yekuona iyo inokutendera kuti unakirwe nerakanyanya ruzivo rwekutamba.
Ultra-Inokurumidza 1ms Nguva Yekupindura
Usarasikirwa nechinhu ne1ms yekupindura nguva, apo yega yega inofamba furemu inobatwa pasi kungoita millisecond. Wana kumucheto kwakakwirira pamusoro pevadzivisi vako, yakanakira FPS mitambo.
Rusununguko Kubva Screen-Kubvarura NaFreeync
Yakavakirwa-mukati AMD Radeon FreeSync tekinoroji yakagadzirirwa kuzadzikisa iyo yakatsetseka uye yakagadzikana mutambo wemitambo nekubvisa zvese zvinoonekwa kubvarura, kudzadzarika, uye kukwikwidza.
Zvadaro: 4K simbi Series-UHDM433WE
144hz Kubhejera Monitor
1ms Kutamba Kwemitambo
24 Inch Kubheja Monitor 144hz
Yakakombama Gaming Monitor
Kubhejera Monitor 144hz 1ms
Muenzaniso: YM320QE (G) -75Hz